बाजी कसले मार्ला, प्रदीपको ‘रोज’ कि पूजाको ‘रामकहानी’ ? « Ramailo छ
बाजी कसले मार्ला, प्रदीपको ‘रोज’ कि पूजाको ‘रामकहानी’ ?
प्रदीप खड्का र पूजा शर्मा पछिल्लो समयका चम्किएका नायक र नायिका हुन् । यी दुईको फ्यान फलोअर्स लोभलाग्दो छ । ‘प्रेम गीत’बाट चलेका यी दुई स्टार भदौ २२ गते आमने सामने हुँदैछन् । प्रदीपको ‘रोज’ र पूजाको ‘रामकहानी’ एकसाथ चल्दा कसको फिल्मले बाजी मार्ला ? फिल्म वृत्तमा अहिले यसकै चर्चा छ । अहिले भने प्रदीप र पूजा बारे छोटो चर्चा गरौं ।
पहिलो फिल्म ‘स्केप’ फ्लप भएपछि नायक प्रदीप खड्का विदेशिने मुडमा थिए । ‘ठूलो मान्छे’ जस्ता फिल्ममा लगानी गरेका प्रदीपले निर्देशक सुदर्शन थापा लाई गडफादरको रुपमा भेटे । सुदर्शन थापाको निर्देशनमा बनेको ‘प्रेम गीत’ पछि प्रदीपले पछाडी फर्केर हेर्नु परेको छैन । यो लभ स्टोरी फिल्म हिट भएपछि प्रदीप स्टार नायकको रुपमा कहलिए । प्रदीपको डिमान्ड अहिले उच्च छ । उनी मोटो पारिश्रमिक रकम लिएर फिल्म खेलिरहेका छन् । ‘लिलिबिली’ पछि प्रदीप ‘रोज’ लिएर दर्शक माझ आउन लागेका हुन् । ‘रोज’ प्रोमो :
कलरफूल लभ स्टोरी फिल्मका चकलेटी हिरो ‘रोज’मा भने भिन्न भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । निरक पौडेल निर्देशित फिल्ममा उनले आफ्नो चल्दै आएको अवतार परिवर्तन गरेका छन् । बुझिए अनुसार फिल्ममा उनी क्रिमिनल लभर व्वोयको भूमिकामा छन् । धेरैले रोजमा प्रदीपले निभाएको रोजको भूमिकालाई रिस्क को रुपमा लिइरहेका छन् । प्रेम गीत, यसको सिक्वेल र लिलिबिलीका लभर व्वोयलाई ‘रोज’मा दर्शकले कुन रुपमा लेलान् ? यसलाई प्रतिक्षाको रुपमा हेरिंदैछ । ‘रामकहानी’ प्रोमो :
डेव्यु फिल्म ‘थ्री लभर्स’ देखि ‘मधुमास’, ‘अभै पनि’ र ‘चंखे पंखे शंखे’ नायिका पूजा शर्माले असफलताको स्वाद चाखि राखिन् । फिल्म प्रेम गीत मा यी असफल नायिकालाई लिएर निर्देशक सुदर्शन थापाले रिक्स मोले । जुन रिस्कले सेफल्याण्ड लियो । ‘प्रेम गीत’ चलेपछि पूजाले पनि पछाडी फर्केर हेर्नु परेन । दर्शकमाझ उनको बेग्ले क्रेज कायम रह्यो । पूजा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र युट्युवमा सर्वाधिक हेरिने सेलिव्रेटी मध्येमा पर्न आउँछिन् । अझ ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ चलेपछि त पूजाको हाइ हाइ नै भयो । आकाश र पूजासँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
सुदर्शन थापाकै निर्देशन रहेको फिल्म ‘रामकहानी’ बाट पूजा लगालग हिट फिल्म दिने सोचमा छिन् । आकाश श्रेष्ठलाई जोडीको रुपमा रोजेकी पूजाले केदार घिमिरे माग्ने बुढा, जितु नेपाल, विल्सन विक्रम राई जस्तो चर्चित हाँस्य व्यांग्य कलाकार राखेर पारिवारिक दर्शक तान्न खोजेकी छिन् । यति हुँदाुहँदै पनि रामकहानी पूजाका लागि अग्नि परिक्षा नभएपनि उत्कृष्ट अंक ल्याएर पास हुनुपर्ने परिक्षा भने हो । किनकी ‘रामकहानी’ ले राम्रो गर्ने धेरैको आशा छ ।
भदौ २२ को परिक्षा पूजा र प्रदीप दुवैका लागि महत्वपूर्ण छ । यो परिक्षामा पास र फेलको गणना त हुन्छ नै सँगै कसले कति नम्वर ल्याए त्यो पनि हिसाब किताब हुनेछ ।